Schroeder Shores echibini cabin - I-Airbnb
Schroeder Shores echibini cabin
Le cabin friendly usapho idityaniswe kwinkampu zonyaka. Indlu kunye nepatio ijonge echibini. ILake Minnewaska ilungile ngaphaya kwesitrato (isitalato sokuhlala esizolileyo) kunye nebala lenkampu kunye necabin share 250' yonxweme olunesanti. Ichibi linzulu kuphela esinqeni 100' ukusuka elunxwemeni kunye nesanti esezantsi ngoko ke yindawo entle yokudada okanye ukudlala imidlalo yamanzi.
Ikhabhini ilala 6, 8 ukuba usebenzisa i-draut couch. Ibhafu enye epheleleyo kunye nehafu yokuhlambela enye. Ikhitshi eligcweleyo kunye negrill ukugcina wonke umntu ondlekile kwaye onwabile!
Ikhabhinethi isandula ukulungiswa ukuze ukonwabele izixhobo ezitsha kunye nemvelaphi engathathi hlangothi. Indawo yokuhlala evulekileyo yamkela ubusuku bomdlalo wosapho kwitafile yokutyela kwaye indawo yokucima umlilo ngaphandle ihlala ilungele i-smores.
Le propathi ikwindlela yokuhlala echibini enenyoka ecaleni elingasentla kweLake Minnewaska. Kukho iindawo ezimbalwa ezongezelelweyo zenkampu ecaleni kwendlela ngoko akuqhelekanga ukubona abantu abahamba elwandle kwii-swimsuits okanye i-joggers befuna indlela ebukekayo. Indlela ayinayo indledlana esecaleni kodwa indlela yechibi idumile phakathi kwabahambi ngebhayisekile nabahambi ngeenyawo, wonke umntu uziva ekhuselekile.
Sihlala edolophini ukuze sifumaneke ngemibuzo okanye iingxaki. Ikhabhinethi imiselwe ukuzijonga ngokwakho ukuze usazise ngomyalezo ukuba kukho into oyifunayo!